Kullan Dib Loogu Eegayo Sharciyada Ganacsiga iyo Nolol maalmeedka Bulshada oo Garoowe Lagu Qabtay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Kullan Dib Loogu Eegayo Sharciyada Ganacsiga iyo Nolol maalmeedka Bulshada oo Garoowe Lagu Qabtay
Kullan Dib Loogu Eegayo Sharciyada Ganacsiga iyo Nolol maalmeedka Bulshada oo Garoowe Lagu Qabtay
August 22, 2017 - By: Cumar Mohamed
Magaaladda Garoowe waxaa lagu qabtay kullan hal maalin socoday oo dib loogu eegayay, lagu dabagalayay mashruuca fududaynta iyo horumarinta ganacsiga yar yar iyo xoojinta hab nololeedka wanaagsan, iyo sharciyadda saameeya ganacsiga yar yar.
Kullankan oo ay soo qabanqaabisay hay’adda Worldvision , waxaa ka qaybgalay Wasiiru-dowlaha maaliyadda Puntland Maxamuud Faarax Beeldaaje,Qaar ka mid ah guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka Nugaal, Ganacsatada iyo masuuliyiin ka socday Xarumaha farsamada gacanta.
“ waxaa jira labo shir oon ku qabanay Garoowe, oo ay ka qaybgaleen inta maanta halkan fadhida, muhiimadda uu leeyahay shirkan uu leeyahay waxaa weeye in la isku keeno dhammaan daneeyayaasha mashruucan oo ay ka mid yihiin ganacsatada, xarumaha bixiya waxbarshada farsamada gacanta iyo guddiga la yiraahdo PMC, Guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka Nugaal iyo Wasaaradaha khuseeyo” sidaas waxaa tiri Sundus Daahir Cismaan oo ahayd qabanqaabiyaha shirka ee Hay’adda Worldvision.
Edwin M. Opiyo oo ah madaxa mashruuca ee hay’adda Worldvision oo ka hadlay kullanka ayaa sheegay in Mashruucan wuxuu wax weyn ka bedelay nolosha degmooyin gobolka Nugaal saddexdii sanno ee la soo dhaafay. wuxuuna tilmaamay in hay;adu ay ka sii shaqayn doonto sidii deeq bixiyayaasha loogu qancin lahaa in mashruucu uu sii socda.
Guddoomiyayaasha degmooyinka Burtinle, Dangoroyo, Eyle iyo godob-jiiraan ee gobolka Nugaal oo kullanka hadalo ka soo jeediyay ayaa isku raacay in bulshadda degaamadooda ku nool ay si wanaagsan uga faa’iidaysteen mashruuca, islamarkaana uu saameyn ku yeeshay noloshooda, uuna kobciyay dhaqaalaha dad farabadan.
Wasiiru-dowlaha Maaliyadda dowladda Puntland oo kulanka furay, soona xiray ayaa uga mahadceliyay Hay’adda Worldvision mashruucan lagu horumarinayo nolosha asaasiga ee dadka, laguna horumarinayo ganacsiga yar yar ee dadka.
Wuxuu sheegay in ganacsiga ku dhisay hal-abuurka iyo aqoontu uu kor u qaado nolosha dadka, oo qofku ku hormarin karo noloshiisa iyo mid qoyskiisa.
Wasiiru Dowlaha Maaliyadda Puntland Maxamuud Faarax beeldaaje
Kullankan oo daba-socoday kullamo hore loogu qabtay gobolka Nugaal, kuwaasi dib loogu eegayo waxyaabihii ka qabsoomay mashruuca iyo wixii ka qabsoomi waayay, waxaana intii uu kullanku socday ka soo qaybgalayaashii ay soo bandhigeen horumarka uu sameeyay mashruucu iyo caqabadaha ka horyimid iyo waxyaabaha sababta u ahaa.